Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 20, 2018 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kunyangwe kuri kutaurirana mari yekudzidziswa kwepurojekiti yako kana kupa pfungwa dzako chete, zvakakosha kugona hunyanzvi hwekunyengetedza, kunyanya kana tarenda iri risiri rekuzvarwa kwako. Heano mazano edu aunogona kushandisa mumamiriro ese ezvinhu.
Kukwanisa kufadza vamwe
Muhupenyu hwehupenyu uye hwehutano, zvinokosha kuva nechinangwa chenguva refu. Pamwe munzira, iwe unofanirwa kuzvipira, dzimwe nguva zvinobatsira kuti ugare wakakwanisa iwe nemakwii ekufambisa mune zvekushanda kwako. Kuita izvi kuchakubvumira kuti uswedere pedyo kune vamwe vako paunenge uchiwana rudo rwavo.
Purazi pasina kuva mutongi
Hazvina mhosva kuti iwe unokosha zvakadini nemafungiro ako, chengetedza nzvimbo yako uye usapinda kurwiswa kwepamberi kuitira kuti mutauriri wako arege kusungirirwa zvachose nemafungiro ako. Icho chinyengeri ndechokuti uchengetedze inzwi rekutenderera mukati mehurukuro yako uye ipai vateereri vako nguva yekuona kana kuongorora mhinduro dzako. Kana izvi zvakakwana zvakakwana, vateereri vako vachazviziva.
Simbisa maonero ako
Kune rumwe rutivi, pika purojekiti yako kana mazano ako muchimiro chemubvunzo zvakafanana nekubvunza vateereri vako kuti vape chokwadi. Saka dzivisa kuwira mukukanganisa uku. Kana iwe uchinetseka kuti pfungwa dzako dzingaite senge dzekupusa, usazviratidze. Ban "ndinofunga" kana "zvinogoneka" kubva mumazwi ako, ita shuwa kuti mazwi ako anoratidza kuvimba kwako kwakazara munharo dzako
Kuti uite zviri nani kugadzirira hurukuro dzako, tsvaga kare nezvemhando yevateereri iwe uri kutarisa. Ziva unhu hwavo, maitiro avo, tsika dzavo, zvido zvavo nevamwe. Iwe uchaziva kuti inzwi rakaita sei paunenge uri musangano kana kubvunzurudza uye yako yakanyatsove yakanyatsojeka. Mharidzo yako ichava yakanyanya kugamuchirwa.
VERENGA Nyora email kana musipo
Sarudza mifananidzo yakanaka
Mukuwedzera, nharo uye pfungwa dzaunofambira mberi zvichasimbiswa mupfungwa zvakanyanya nyore kana dzichatsigirwa nemifananidzo ichapupurira kukosha. Vagadzirire mumavhidhiyo, mifananidzo uye graf format, izvi zvichaunza kuyerwa kwemashoko ako. Vateereri vako vachakwanisa kuve nechiratidzo chakajeka chemashoko ako, pfungwa, mazano kana zviwanikwa.
Rurimi rwomuviri rwakanaka uye ruzivo
Usakanganwa kuenzanisa mazwi ako nezviito zvako kuti mharidzo yako inakidze uye kusimbisa kuzvipira kwaunayo kuprojekiti yako kana mazano ako. Semuenzaniso, kurerekera musoro wako kune vateereri chiratidzo chekufarira mhinduro kubva kunhengo dzevateereri. Kune rumwe rutivi, kuyambuka maoko ako kunoratidza kuti wakavharwa kune zvekunze kutaura.
Tinoramba tichitaura kakawanda, kuseka, nokuti kusemwe kunopararira. Icho chimiro chechisikigo uye chekusaziva kwevanhu chinomutsa kukoshesa kwekutaurirana kwako. Iye achazokudzorera kwauri iwe pachako. Saka funga nezvekunyemwerera, pfungwa dzako dzichaita vateveri vakawanda kupfuura neguva rekuviga.
Gamuchira kutsoropodza kunovaka
Yeuka kuti chero ipi zvayo inogona kuva nechikanganiso, hapana chaicho chinofanirwa kuva chakakwana. Zvisinei, kubvumira vateereri vako kuti vataure kana kururamisa zvinoratidza kufarira kwako pakudzivirira kwavo. Nokugadzirisa mharidzo mune imwe nzira, unotsigira kunzwisisa kwako kwekukumbira kwavo uye zvido zvavo. Mafungiro aya achavimbisa vanhu pachena nezvekuvhura kwako kune pfungwa itsva nekusimbisa vanhu vanofunga kuti uri kuedza kuisa pfungwa dzavo pavari.
VERENGA Nzira yekunyora sei zvakajeka uye zvemabhizimisi emaimeri?
Ratidza kufarira vamwe nekubvunza mibvunzo
Sei vateereri vako vangaita kuti iwe ufarire kana iwe, iwe pachako, uchiita sokuti hauna kukanganiswa zvachose nemafungiro ako akaiswa pamberi pako? Ita zvose zvaunofunga panguva yechipupuriro chavo kuitira kuti naivo vakupei ivo sevanowedzera. Kuti uite izvi, vabvunze mibvunzo yakakosha iyo ichaita kuti iwe unofarira uye kuremekedzana.
Dana zita rako nezita
Isuwo tinoona kuti vanhu vanodanwa nemazita avo vanofunga kuti vanofunga. Zvechokwadi, tinowana chimwe chifaro patinodanwa nezita redu. Saka kuti chiitiko chacho chigarire, saka usazviisa kune kukwazisa, ita zvimwechetezvo panguva dzehurukuro dzako, pasinei nechinangwa. Nokudaro, kukutaurira zvakananga kumudzidzisi wako kuchakubvumira kuti uwedzere simba rako rekunyengetedza.
Taura iwe pachako kuti uswedere pedyo nemudzimai wako
Zvakaoma, zvisinei, kubvuma mhedziso yemumwe mutorwa, rega kutendera kuvimba naye. Iyo mharidzo inoputsa chiringa ichi. Zvechokwadi, zvisinei nokuti zvinoenderana nemafungiro ako, kukosha kweprojekti yaunotungamirira, wako wekutaurirana achagara achikakavadzana nharo dzako sezvaunoramba uchizivikanwa zvachose. Kungongoratidzira kuti munhu werudzii iwe unotungamirira kune kubvumirana.
Gutsikana nechikonzero chinotendwa
Kuve sekugutsikana sezvinobvira, tsigira pfungwa uye nharo kana nyaya dzinokufadza, pasina "kuzviita". Zvechokwadi, vanhu vanogutsikana nevanokonzera kuti vanotsigira zvakachengeteka ivo pachavo pachavo. Nokudaro, zvichava nyore kwauri kuti uite vateereri vako kana iwe, iwe pachako, uchitenda mune zvaunofunga, nharo kana mapurojekiti.
VERENGA Siyanisa email yehunyanzvi kubva mutsamba
Bvumira vateereri vako kuti vaite zvishoma nezvishoma pfungwa dzavo
Unyanzvi hwekugutsikana hunoenderana nekushivirira kwako nekati yako interlocutor kana vateereri vako kuti vanzwisise pfungwa dzenyu. Usaramba uri munzira imwe chete kana iwe pakutanga uchitarisa mharidzo yako uye nharo dzinoita sedzinobatsira. Zvechokwadi, kushivirira kune vateereri vako kunogona kuunza kupesana kwakasiyana kwechinangwa chako. Kuti udzivise mumwe munhu kubva pakuvhara, zvipe nguva yekuchinja kana kuvandudza.
Uyezve, kuti agutsikane nemudzidzisi wake, inofanira kuzivikanwa kuti zviri nani kugadzirisa kutaura kwake. Kuvandudza mafungiro ako emagetsi achakubatsira kuti utsungirire matanho akasiyana evateereri vako. Dzidzira nguva dzose mune izvi, iwe zvechokwadi uchawana zvizhinji zvizhinji.
Nzira yekugutsikana sei mune unyanzvi hwokugadzirira? November 25th, 2018Tranquillus
pashureTsvaga muganhu pakati pehupenyu hwehupenyu uye hwehutano
zvinoteveraKushungurudzika, tora danho shure uye utaure manzwiro ako nenzira dzinovaka.